Somaliya oo safka hoose ka gashay wadamada uu ka jiro guurka qasabka ah
Saturday January 07, 2017 - 12:02:19 in Wararka
Warbixin ay soo saartay Hay'adda badbaadada Caruurta ee Save The Children,ayey ku sheegtay in sanadka 2017 saadaashu muujinayso in ka badan 15 Milyan Gabdhood oo aan qaan gaarin guur qasab ah la gelin doono Caalamka oo dhan.
Hay’adda waxa ay sheegtay in Gabdhaha da’adu u dhaxeyso 15-18 jir ay u nugul yihiin guurka qasabka ah oo waliba lagu darayo dad Rag Awoowe u noqon kara da’ahaan.
Save The Children,waxa ay sheegtay in maalin kasta oo ka mid ah 2017-ka ay 12,000 Gabdhood oo aan qaan gaarin guursan doonaan sida ay muujineyso daraasad ay soo saartay.
Warbixintan ayaa laga sameeyay 144 dal oo ay Somaliya ka mid tahay,waxaana Warbixinta ay dalal u badan Afrika ku sheegtay in uu ka jiro guurka qasabka ah waliba aad ugu badan yahay.
Sababta ayey Warbixintu ku sheegtay in ay tahay Faqriga,Shaqo la’aanta iyo waxbarasho la’aanta ka jirta Qaaradda Afrika.
Haweenkaas lagu qasbo guurka ayaa sidoo kale u nugul geerida xilliga Foosha,waxaana ay dhintaan xilligaas maaddaama jirka Gabdhaha da’daas ku jira gaar ahaan Miskaha uusan isu diyaarin fool.
Dalalka kala ah :Niger, Chad, Central African Republic, Mali iyo Soomaaliya ayaa ugu hooseeya Waddamada guurka qasabka ah geliya Gabdhaha aan gaarin xilliga guurka,waxaana ay daraasadda intaas ku dartay in Waddamadaas sidoo kale ay ku badanyihiin kiisaska umul raaca.